ကားပိုင်ရှင်တစ်ဦးကသူ့ကားကိုပြန်များအတွက်သဘောတူညီခဲ့ရာအရပျမြားနှငျ့အခြိနျမှာဖွင့်မပြပါဘူးဆိုရင်ကမရှိတော့အာမခံထားရဲ့အဖြစ်ကြောင့်ငှားရမ်းကာလ၏ရပ်စဲပေးရန်, သူတို့ကိုဆက်သွယ်ပါနှင့်ကားတစ်စီးမောင်းနှင်ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်မဖြစ်နိုင်ပါင် အကယ်. ဤအဆင့်များအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ:
လုံခြုံနှင့်ဥပဒေရေးရာအရပျ၌ကားရပ်များနှင့်သင်တို့နှင့်အတူရှိသော့စောင့်ရှောက်လော့။ ဒါကြောင့်ယာဉ်ရပ်နားမှုအတွက်ပေးချေရန်လိုအပ်သောင် အကယ်. ကျွန်တော်တို့ဟာငွေကြေးပြန်လည်ဘို့စစျဆေးနိုငျနိုင်အောင်, ထိုငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းကိုစောင့်ရှောက်။
သူတို့ရဲ့ကားတစ်စီး၏တည်နေရာနှင့် ပတ်သက်. ကားပိုင်ရှင်အကြောင်းကြားနှင့်နှစ်ဖက်စလုံးများအတွက်အဆင်ပြေအချိန်အပေါ်သို့သဘောတူဒါကြောင့်ကားပိုင်ရှင်တစ်ဦးကသူတို့သော့ဖွင့်ကောက်လို့ရပါတယ်။